Ny fangatahana ara-barotra dia manampy amin'ny fitomboan'ny tombotsoan'ny hotely eropeana amin'ny volana novambra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fangatahana ara-barotra dia manampy amin'ny fitomboan'ny tombotsoan'ny hotely eropeana amin'ny volana novambra
Ny fangatahana avy amin'ny sehatry ny varotra dia mitentina maherin'ny 40 isan-jaton'ny alàlan'ny efitrano fandraisam-bahiny tamin'ny Novambra ary nanampy tamin'ny fampisondrotana tombony 5.2 isan-taona isan-taona ho an'ny trano fandraisam-bahiny manerana an'i Eropa, araka ny angon-drakitra farany manara-maso ireo hotely feno.
Volana iray amin'ny fitomboan'ny tombom-barotra matanjaka ho an'ny hotely ao amin'ny faritra ny volana Novambra, miaraka amin'ny GOPPAR isan-taona dia 9.5 isan-jato noho ny fe-potoana mitovy amin'ny 2017.
Ity no volana faha-10 nitomboan'ny tombom-barotra tamin'ny taona 2018, miaraka amin'ny tsinontsinona tokana nijaly tamin'ny Mey, ary, tsy nisy fianjerany tanteraka tamin'ny volana desambra, ny hotely any Eropa dia voarakitra an-tsoratra fitomboana tombony lehibe hafa amin'ny taona 2018, taorian'ny fiakarana 8.9-isan-jato tamin'ny 2017. .
Ny tombom-barotra isaky ny efitrano any amin'ny hotely any Eropa dia nitombo efa ho 20 isan-jato nandritra ny 24 volana lasa ka hatramin'ny 64.57 € tao anatin'ny 12 volana hatramin'ny Novambra 2018, hatramin'ny € 53.99 nandritra ny fe-potoana mitovy tamin'ny 2015/2016.
Ny fitomboan'ny tombom-barotra amin'ny volana dia notarihin'ny fiakaran'ny vidin'ny YOY, izay nahitana fiakarana tao amin'ny efitrano (hatramin'ny 5.6 isan-jato) ary ny fidiram-bola ho an'ny Sakafo sy sakafo (1.4 isan-jato), isaky ny efitrano misy; na eo aza ny fihenan'ny Fihaonambe & Fifaninanana (mihena 0.1 isan-jato) ary ny fidiram-bola Leisure (6.1 isan-jato).
Vokatr'izany dia nitombo 3.9 isan-jato ny TRevPAR tamin'ny Novambra lasa € 168.83. Ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny efitrano mandritra ny volana dia natsangan'ny fiakarana 4.7-isan-jato amin'ny tahan'ny efitrano salantsalany ary notohanan'ny fiakarana 0.6-isan-jato amin'ny fipetrahan'ny efitrano.
Ho fanampin'ny kaonty mihoatra ny 40 isanjaton'ny tinady, ny sehatra ara-barotra dia nampiroborobo ny salan'isan'ny efitrano antonony ary nampidirina ny fiakarana YOY tao amin'ny Fihaonamben'ny Residential (miakatra 3.8 isan-jato) ary ny Corporate (miakatra 0.8 isan-jato).
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka lehibe - Eropa (amin'ny EUR)
Novambra 2018 vs. Novambra 2017
RevPAR: + 5.6% ka hatramin'ny € 106.22
TRevPAR: + 3.9% ka hatramin'ny 168.83 €
Karama: -0.2 pts. hatramin'ny 35.5%
GOPPAR: + 5.2% ka hatramin'ny € 52.56
Indray mandeha ihany koa, ny fitomboan'ny vola miditra any Eropa amin'ity volana ity dia notohanan'ny tahiry, izay nahitana fihenan'ny 0.2-isan-jato ny karama hatramin'ny 35.5 isanjaton'ny vola miditra rehetra. Ny fanovana tombom-barotra dia voarakitra amin'ny 31.1 isan-jaton'ny vola miditra rehetra salama.
"Ny 2018 dia tantara tsara be ho an'ny hotely any Eropa miaraka amin'ny tahan'ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra izay entin'ny volavola, izay manohy hahatratra avoavo vaovao," hoy i Michael Grove, talen'ny Intelligence and Solutions ho an'ny mpanjifa, EMEA, ao amin'ny HotStats. "Ary izany rehetra izany na eo aza ny sary ara-toekarena miha sarotra amin'ny faritra."
Ho an'ny trano fandraisam-bahiny any Bruxelles, volana novambra iray nahitana fahombiazana ambony sy ambany ny volana Novambra, satria nitombo 25.1 isan-jato YOY ny tombony isaky ny efitrano ary nahatratra ny avo indrindra ho an'ny 2018 tamin'ny € 71.16 Ity dia 47 isan-jato ambonin'ireo haavo GOPPAR ho an'ny taona 2018 amin'ny € 48.51. Ny fitomboan'ny tombom-barotra amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny renivohitr'i Belzika dia nitazona làlana miakatra hatrany tato anatin'ny 24 volana.
Ny fitomboan'ny taona isan-taona amin'ny RevPAR amin'ny trano fandraisam-bahiny any Bruxelles dia notarihin'ny fitomboan'ny haavon'ny haben'ny efitrano fandraisam-bahiny, izay nitombo tamin'ny isa 5.7 isan-jato mahatratra 81.6 isan-jato, ary ny fiakarana 3.7-isan-jato tamin'ny tahan'ny efitrano antonony hatramin'ny € 161.68.
Hatramin'ny nanombohan'ny fifampiraharahana Brexit 24 volana lasa izay, ny haavon'ny RevPAR amin'ny trano fandraisam-bahiny any Bruxelles dia nitombo efa ho 30 € hatramin'ny 110.13 € tao anatin'ny 12 volana hatramin'ny Novambra 2018. Nandritra io fe-potoana io ihany, ny tombom-barotra isaky ny efitrano dia nitombo avo roa heny hatramin'ny € 46.71.
Na eo aza ny fitomboan'ny fidiram-bola dia mamela ny trano fandraisam-bahiny any Bruxelles hampihena ny tahan'ny karama, izay volana nidina 3.5 isan-jato isan-jato tamin'ny volana novambra, dia mijanona ho 35.1 isan-jato amin'ny vola miditra rehetra. Na eo aza izany dia nijanona ho matanjaka hatrany amin'ny 38.2 isanjaton'ny vola miditra ny fiovam-po amin'ity volana ity.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka lehibe - Bruxelles (amin'ny EUR)
RevPAR: + 11.5% ka hatramin'ny € 131.91
TrevPAR: + 5.5% ka hatramin'ny 186.40 €
Karama: -3.5 pts. hatramin'ny 35.1%
GOPPAR: + 25.1% ka hatramin'ny € 71.16
Mifanaraka amin'ny fitomboan'ny any Bruxelles, ny fitomboan'ny tombom-barotra ao Dublin dia mitohy tsy miato, miaraka amin'ny fitomboan'ny GOPPAR dia voarakitra 68.4 isan-jato tao anatin'ny 36 volana lasa, ary nahatratra 96.51 € ny 12 volana hatramin'ny Novambra 2018.
Ho an'ny volana Novambra, ny tombom-barotra isaky ny efi-trano dia nitombo 9.8 isan-jato isan-taona hatramin'ny € 83.13 ary volana fahasivy nisesy nitombo ho an'ny trano fandraisam-bahiny tao amin'ny renivohitra Irlandy.
Ny fitomboan'ny tombom-barotra tamin'ity volana ity dia nateraky ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny departemanta rehetra, saingy notarihin'ny fitomboan'ny RevPAR, izay nitombo 9.2 isan-jato YOY ka hatramin'ny € 139.95, satria ny trano fonenana dia nahatratra 83.3 isan-jato avo ary nahatratra 167.95 € ny salan'isan'ny trano salantsalany.
Ny fidiram-bola mitombo dia nofenoin'ny fidinan'ny vidiny, izay nahitana fihenan'ny 0.9 isanjaton'ny karama hatramin'ny 30.8 isanjaton'ny vola miditra rehetra ary nandray anjara tamin'ny tantara tsara mitohy ho an'ireo mpandraharaha ao Dublin tamin'ny volana.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka lehibe - Dublin (amin'ny EUR)
RevPAR: + 9.2% ka hatramin'ny € 139.95
TrevPAR: + 7.0% ka hatramin'ny 227.81 €
Karama: -0.9 pts. hatramin'ny 30.8%
GOPPAR: + 9.8% ka hatramin'ny € 83.13
Horohoron-tany 6.6 namely an'i Vanuatu
Ny Abu Dhabi National Hotels dia miantoka fampindramam-bola hividianana trano any Dubai